Maroodiga oo noqday naaslayda ugu soo-jeedka badan dunida – Kasmo Newspaper
Maroodiga oo noqday naaslayda ugu soo-jeedka badan dunida
Updated - March 3, 2017 12:11 pm GMT
Maroodiga Afrika in uu yahay xayawaanka dunida ugu weyn waxaa u sii wehelisa in uu yahay naaslayda ugu soo jeedka badan dunida.
Cilmi-baarayaasha Jaamacadda Koofur Afrika ee Witwatersrand ayay la tahay in uu 2 saac oo qur ah ka seexdo habeenkii, taas oo ka duwan sidii loo haystay markii hore ee ahayd 4 ilaa 6 saac.
Sida lagu muujiyay daraasad lagu faafifiyay wargayska “Plos One”, aqoon-yahannadu waxay tijaabo 35 maalmood ah ku sameeyeen 2 maroodi oo si dabiici ah ugu nool Seeraha Qaranka “Chobe” ee Botswana. Duur-joogtaas waxaa lagu rakibay qalabk hurdada lagu cabbiro “Sleep Tracker” iyo mid luqunta loo suray oo lagu ogaanayo hadba dhanka uu u seexdo, marka uu nasiinada ku jiro.
Waxaa markaas la ogaaday in 2da maroodi seexdeen, isku celcelin ahaan, 2 saac habeenkii, taas oo ah wakhtiga ugu gaaban ee lagala kulmay naasleeyda ilaa hadda la darsay. Waxaa intaas dheer iyaga oo maalmaha qaarkood an indhahaba is galin, ugu badnaan 46 saac oo xiriir ah, iyo in ay jaraan masaaxo aad u dheer oo gaaraysa ilaa 30 Km.
Waxaa la tixgaliyay in arrintaasi ugu wacantahay walwalka ay ku hayaan libaaxyada iyo boojiska; waxaa kale oo baarista lagu ogaaday in maroodiyadu aanay dhacdiid u seexan habeen kasta.
Daraasadaha hurdada maroodiga la dhaqdo waxay muujinayaan in ay habeenkii seexdaan 4 ilaa 6 saac, laakiin marka ay joogaan deegaankooda dabiiciga ah (Natural Habitat) ay seexdaan 2 saac oo qur ah habeenkii. Arrintaasna waxaa loo aanaynyaa xajmiga weyn ee jirkooda iyo in ay xaaladda lulmoonshaha “REM” (Rapid Eye Movements) galaan 3 ama 4tii maalmoodba 1 mar.